Doorashada FIFA oo la qaban doono Febraayo - BBC Somali
Doorashada FIFA oo la qaban doono Febraayo
20 Luulyo 2015
Hay'adda maamusha Kubadda cagta ee adduunka ee FIFA ayaa ku dhawaaqday in doorashada guddoomiyaha cusub ay dhici doonto Zurich, 26ka Febraayo ee sannadka dambe. Madaxa FIFA ee wakhtigan Sepp Blatter ayaa ku dhawaaqay inuu xilka ka degi doono bishii hore, ka dib markii la xiray saraakiil sare oo hay'adda ka tirsan oo lagu eedeeyey musuqmaasuq.
Ergooyin FIFA ka socda ayaa iminka kulan ku leh Zurich ayagoo ka arrinsanaya qorsheyaal isbeddel lagu samaynayo, oo ay ku jiraan in ay ugu yaraan xilka hayaan guddoomiyaha iyo guddiga fulinta muddo 12 sano ah, iyo sidoo kale in mushaarkooda la shaaciyo.
War hadda soo dhacayna, Guddoomiyaha FIFA Sepp Blatter ayaa isaga baxay shir jaraa'id, ka dib markii uu billowgiiba carqaladeeyey nin hortiisa soo istaagay oo la hadlay weriyeyaasha, ka hor intii uusan xirmo warqado ah ku tuurin. Mr. Blatter wuxuu u muuqday inuu xanaaqsanaa, wuxuuna sheegay inuu sii wadi doono marka goobta la nadiifiyo.